Ukuphupha ngenaliti Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ngubani ongayazi intetho eyaziwayo "Inaliti kwindawo yokugcina ukutya"xa ujonge into ethile ngokukodwa. Kodwa ngaphezulu kwako konke asikuvumeli oko kusidimaze kwaye sihlala sijonge. Kukho iintlobo ezininzi zeenaliti: iinaliti zepineyini, iinaliti zokuthunga, iinaliti zokunitha, iinaliti zokukhwela, i-awl, iinaliti zokufumana, izikhonkwane zokhuseleko, kunye nezikhonkwane ezithe nkqo. Inaliti yekhampasi isibonisa indlela. Ukugqobhoza kuhlatywa ngenaliti engenamngxunya. Kwaye oonodoli abancinci banokuhlatywa ngenaliti kwiminyhadala ye-voodoo, umzekelo, ukuba unqwenela abantu abathile into embi.
Kodwa inaliti ifuna ukusixelela ntoni ephupheni? Ufuna ukusibonisa ntoni?
1 Uphawu lwephupha «inaliti» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «inaliti» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «inaliti» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «inaliti» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yephupha "inaliti" kukuchazwa ngokubanzi kwamaphupha njengophawu lwe ingxaki y Ukulwa etolikwa kwingingqi yosapho. Ukongeza, inaliti ilumkisa abo bakhuphisana nabo ephupheni, ukuba iphupha alithathi nzulu, kuba banokonakalisa nje kancinci.
Inaliti njengophawu lwephupha nayo ingangumqondiso wamandla okuphilisa, ngakumbi ukuba iinaliti zokucoca umzimba zibonwa ephupheni. Ukufezekisa ngempumelelo inkqubo yokuphilisa ngokwasemoyeni, iphupha kufuneka livumele ukufezekiswa okanye ulwazi lwangaphandle kubuntu bakho bangaphakathi. Oku kubuhlungu, kodwa kuya kukunceda ekugqibeleni.
Kutoliko jikelele lwamaphupha kukho iimeko ezininzi zamaphupha ezinxulumene nesimboli yamaphupha "inaliti", enokuchazwa ngokwahlukileyo. Iinaliti zomthi ephupheni zibonisa into elungileyo. imeko yezempilo kunye nobomi benkonzo ende.
Ukubona kweenaliti zesinyithi njengophawu lokuphupha kulumkisa umntu ophuphayo ukuba kufuneka athathele ingqalelo uhlaselo lwendalo yakhe el mundo ukuvuka. Ukusetyenziswa kwenaliti, ngokunokwenzeka nokunxulumana ne-thimble, ephupheni kufanekisela imeko engxamisekileyo eyenzeka kungekudala, apho iphupha libonakala lingathandekiyo. Ukuba umntu ophuphayo ulufaka inaliti ephupheni, uya kubahoya abanye kunye nosapho lwakhe kwihlabathi elivukayo.
Ukuba iphupha lidlala ngokungakhathali ngenaliti kunye nepincushion ephupheni, liya kuphumelela iintshaba ngenxa yokuziphatha kwalo ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha. Ukukhangelwa kwenaliti njengomfuziselo wokulala kubonisa inkxalabo kwihlabathi eliphaphamayo, nangona kunjalo, elingeyomfuneko.
Ukufumana inaliti ephupheni kuseka ukutolikwa ngokubanzi kwephupha njengophawu lwe abahlobo abalungileyo abo baxabisa kakhulu ukuphupha. Ukuba inaliti yaphuka ephupheni, oku kufanekisela isizungu nentlupheko. Ukuba iphupha linamathela ngomnwe wakho ngenaliti ephupheni, le meko yephupha inokubonisa ukulahleka komhlobo okanye ukuphoxeka kwimicimbi yothando.
Uphawu lwephupha «inaliti» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, uphawu lwephupha "inaliti" inokuchazwa njengophawu lobudoda kwaye lubonise iminqweno yesini yokuphupha. Ukongeza, imele amandla ophuphi wokuqonda imeko yakhe yengqondo ngokuchaneka okukhulu. Olu lwazi lunokukunceda ukumelana ngcono nobomi bakho bemihla ngemihla.
Kwakhona, njengophawu lwephupha, inaliti inokuba luphawu lomzimba kunye nengqondo. Isiporho Yiba ngamaphupha. Ngaphezu kwako konke, zibhekisa kwiincopho ezincinci, apho ukuphupha kufuneka kunyamezele kubomi bemihla ngemihla.
Uphawu lwephupha «inaliti» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya, uphawu lwephupha "inaliti" sisalathiso isini oyindoda. Inaliti inokuba ngu ulwazi olutsha Ufuzisela into etshintsha umbono wamaphupha ebomini bakho.